Anoshanda Apple-1 inotengesa madhora mazana matanhatu ezviuru pamisheni | IPhone nhau
"Retro" iri mufashoni here kana kuti zvinhu izvi zvinongova mugumisiro wekupenga? Iyo inogara iri nhau kana chigadzirwa chekare chinobva kuCompertino kambani yatengeswa, kazhinji nekuti inoitirwa mari yakawandisa, kunyanya kana tichifunga kuti iwo ari nyore emagetsi zvigadzirwa, izvozvi hazvishande uye zvine chinangwa chekutora guruva muchiratidziro. nyaya haina kuita seizvi?
Apple-1 inoshanda nemazvo yakatengeswa nemadhora anodarika mazana matanhatu ezviuru pamusika wapfuura muUnited States of AmericaIwe ungade here kubhadhara iyo huwandu hwemari yeApple-1? Dai iwe waive wakajeka ...
Iyi Apple-1 Yakawanikwa naRick Conte muna 1977 uye yanga iri mumaoko e NGO kubva muna 2007. Nekudaro, mugore ra2014 mutengesi akazvimirira akatanga kufadzwa nazvo ndokuibhadharira chitsama chemari chisati chaitika, kunyangwe tichigona kuwana zano rekutarisa huwandu hombe hwemari iyo ichangotengeswa musheni. Kunyangwe ichifanira kutaurwa kuti iyi Apple-1 haina kuuya yega, inowedzera nhevedzano yezvishandiso izvo zvinowedzera kukosha kwayo zvine hukama nemubatanidzi weApple, ngano Ronald G. Wayne, pakati pevamwe:
Kopi yechibvumirano chako naSteve Jobs naWozniak.
Kopi dzemagwaro akasainwa nezvekusikwa kwekambani naJobs naWozniak.
Makadhi ebhizinesi evatangi veApple
Maererano nekufungidzira, iyo okisheni inofanirwa kunge yakasvika pamadhora mazana masere ezviuruSaka yatengeswa pazasi pekukosheswa kukosha, zvakadaro, tichifunga kuti mamwe maApple-1s achangotengeswa madhora mazana maviri ezviuru, iyi shanduro haitaridze kunge yanga yakachipa chaizvo. Chero nzira, ichaenda kuwindo remumwe mupfumi anoda Apple tsika, kana kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Anoshanda Apple-1 inotengesa madhora mazana matanhatu ezviuru pamusika
iOS 13 inogona kunge isingaenderane neiyo iPhone SE